U-e.tv usuhlwithe i-soapie yodumo ku-SABC | isiZulu
Ngu: Thinus Ferreira 2017-07-17 16:02
Cape Town – U-e.tv usuhlwithe umdlalo kamabonakude wodumo, iDays of Our Lives, nosuneminyaka udlala eziteshini ezehlukene zeSABC njengoba usuzodlala kulesi siteshi esiyimbangi ngesikhathi lapho bebaningi abantu ababukela umabonakude (primetime).
Lo mdlalo owuchungechunge usuzodlala ku-e.tv kusukela ngoMsombuluko ngomhlaka-4 kuSepthemba ngo-17:30.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi iSABC, ngaphansi kobuholi balowo owayeyiChief Operating Officer (COO) yayo, uHlaudi Motsoeneng, yanquma “ukuvala” izinhlelo zakwamanye amazwe kuSABC futhi ikakhulukazi kuSABC3, nokuyilapho iDays of Our Lives "yavalelwa ngaphandle" ngesikhathi isuswa esikhathini eyase ineminyaka idlala ngaso ngo-17:00 maqede yafakwa esikhathini esicishe sibe maphakathi nobusuku ngo-23:30.
Yize noma iDays yayingaconsi phansi kubabukeli, inezibalo ezinhle zokubukelwa futhi ifaka imali eningi kulesi siteshi salo msakazeli womphakathi okuyisona kuphela esigxile ekwenzeni inzuzo (commercial), kodwa ukubukelwa phansi kwalo mdlalo uSABC sekwenze wathola ukuthathelwa phezulu yizimbangi ezinkulu, u-e.tv.
OLUNYE UDABA:U-e.tv usunqamule i-soapie esineminyaka idlala
IDays ku-e.tv izoqala ngesiqephu sesi-12 368.
Ngaphezu kwalokhu ababukeli balo mdlalo balapha eNingizimu Afrika sebezothola ithuba lokuwubuka ngobuchwepheshe obuveza izithombe ezicace bha beHigh Definition (HD) njengoba u-e.tv esakaza ngobuchwepheshe beHD esiteshini zeDStv yakwaMultiChoice ekhokhelwayo (channel-194) kanye nakwi-OpenView HD (OVHD) yakwaPlatco Digital (channel 104).
OyiManaging Director yakwa-e.tv, uMarlon Davids, uthi basazoqhubeka nokwengeza izinhlelo ezisezingeni lomhlaba ezinhlelweni zabo.
IDays of our Lives idlala esiteshini saseMelika, iNBC, kanye nasemazweni amaningi omhlaba.
U-e.tv uzodlala iDays of Our Lives phakathi neviki, bese iphinda ngamaSonto ku-eXtra, nokuyisiteshi esitholakala kwi-OpenView HD (channel 105).